Farmaajo oo difaacay Fahad Yaasiin, kana hor yimid Shaqo ka joojintii uu ku sameeyay RW Rooble (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
BREAKING NEWSFederaalkaMadaxtooyadaTooshka GJ
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa difaacay Agaasimihii Hay’adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji oo uu shaqada ka joojiyay Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada ayaa lagu faray Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin inuu sii wato xilkiisa, wuxuuna Farmaajo sheegay isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay’adda Nabad Sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagaxisadu ku hayaan Soomaaliya iyo saaxibbada caalamkaba;
Wuxuu shaqo ka joojintii Fahad ku tilmaamay tallaabo dhiirrigelin u noqon karta kooxaha arrgaxisada, wiiqaysana sumcadda iyo kaalinta shaqo ee laamaha amniga.
Qodobadda uu Farmaajo uu soo saaray ayaa kala ah:
4. Ugu dambeyntii, Wwuxuu farayaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Golaha Xukuumadda in ay si hufan u gutaan masuuliyadda ka saaran dhammeystirka hawlaha doorashooyinka.
Previous articleRW Rooble oo Shaqadii ka joojiyay Agaasimihii NISA Fahad Yaasiin (Akhriso Wareegto Culus)
Next articleDaalibaan oo Dagaal qaraar kadib la wareegtay Gobolkii ugu danbeeyay ee Panjshir iyo Boqolaal lagu dilay..
Cabdi Xaashi & Mahdi Guuleed oo soo wada saray Habraaca Doorashada Aqalka Sare ee Somaliland (Akhriso)